कसलाई प्रेम पत्र लेख्न चाहन्छिन् उपासना ? - नागरिक रैबार
कसलाई प्रेम पत्र लेख्न चाहन्छिन् उपासना ?
कलाकारहरु सामाजिक संजालमा तस्वीर शेयर गर्दै फ्यानसँग जोडिन्छन् । जसले, कलाकारको हरेक दिनको गतिविधीको बारेमा फ्यानले पनि जानकारी पाइरहेका हुन्छन् ।
नेपाली चलचित्रका कलाकारहरु सोसल मिडियासँग निकै क्रेजी छन् । उनीहरु, आफ्ना नयाँ नयाँ अपडेट सार्वजनिक गर्न पछि पर्दैनन् । तर, कहिलेकाही कलाकारले लेख्ने स्टाटस भने रोचक हुन्छन् ।
नायिका उपासना सिंह ठकुरी इन्स्टाग्राममा सक्रिय छिन् । उनका तस्वीहरु दैनिकजसो सामाजिक संजालमा देखिन्छन् । चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’मा काम गरेपछि नयाँ चलचित्र साइन नगरेकी यी सुन्दरी अहिले आफूलाई मेन्टेन पनि गरिरहेकी छिन् ।
उपासनाले सूर्यलाई प्रेम पत्र लेख्ने इच्छा व्यक्त गरेकी छिन् । उनले, आफ्नो सूर्यलाई प्रेम पत्र लेख्ने चाहना पुरा भैदिए हुन्थ्यो भनेर लेखेकी छिन् ।
हुनत, उपासनाले सूर्यलाई किन प्रेम पत्र लेख्न चाहेकी हुन् यो उनले नै जान्ने कुरा हो । तर, नेपाली चलचित्रकी यी सुन्दरीको प्रेम जीवन अहिलेसम्म सार्वजनिक भने भएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मंगलबार प्राधिकरणबाट बिदा भए । विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान बिदा भएको कुरा धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । उनको पुनर्नियुक्तिका लागि सर्वासाधारणदेखि कलाकारसमेतले अभियान नै चलाए । कुलमान घिसिङको पक्षमा माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ । विज्ञापन यस्तै गायक अमृत गुरुङलाई पनि कुलमानको बिदाइले खिन्न बनाएको छ । उनले सो […]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङले ४ बर्ष बिताए । उनकै कार्यकालमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भयो । १८ घन्टा लामो अन्धकारबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई मुक्ती दिएका कुलमानको कार्यकाल सकिएसँगै उनलाई पुनः प्राधिकरणमा नियुक्ती गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट सुनिन थालेको छ । कुलमानलाई आज बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुनः नियुक्ती गर्ने अपेक्षा आम नागरिकको छ । […]
वरिष्ठ पाइलट विजय लामालाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । वरिष्ठ पाइलट विजय लामालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । सरकारी वायुसेवा नेपाल वायुसेवा निगमका सिनियर पाइलट लामालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । हिजो ललितपुरको स्टार अस्पतालमा स्वाब दिएका लामाको आज पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । उनीसँगै जहाज उडाएका अर्का पाइलट उदय कोल्हात्करलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । लामा र […]